» दोहोरी च्याम्पियनमा ४ हप्ता दोहोरी मै भिडन्त, को पुग्ला सेमिफाईनलमा ?
२३ भाद्र २०७८, बुधबार ११:३९
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २३ भदौ । नेपालकै चर्चित दोहोरी रियालिटी शो ‘दोहोरी च्याम्पियन’ मा उत्कृष्ट ८ जोडीहरु छानिएसँगै ४ हप्ता लामो दोहोरी भिडन्त सुरु भएको छ । यी जोडीहरुको भिडन्तपछि उत्कृष्ट ४ जोडीहरु सेमिफाईनलका लागि छानिनेछन् । आखिर यी ८ जोडीहरुमध्ये कुन जोडी कोसँग भिड्दैछन् त ? हामी यस भिडियो सामग्रीमा एकअर्कासँग भिड्ने यी जोडीहरुले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धीका बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ । तपाईलाई यी जोडीहरुको भिडन्तबाट उत्कृष्ट ४ मा कुन कुन जोडीहरु पुग्लान् जस्तो लाग्छ ? कृपया भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्नुहोस् । दोहोरी च्याम्पियन सम्बन्धी अन्य भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।
१) सरोज सिम्खडा र सिता घिमिरेसँग सविन आचार्य र रिता रावत क्षेत्री– दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ छनौटपछिको पहिलो दोहोरी भिडन्तमा सरोज सिम्खडा र सिता घिमिरेसँग सविन आचार्य र रिता रावत क्षेत्री भिडिसकेका छन् । उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा सितालाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । त्यस्तै सरोजलाई एक जना निर्णायकले फो स्टार र बाँकी ३ जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । सविनलाई एक जना निर्णायकले टु स्टार, निर्णायक दुई जना निर्णायकले थ्री स्टार र एक जना निर्णायकले फो स्टार दिएका थिए । रितालाई एक जना निर्णायकले फो स्टार र बाँकी ३ जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार दिएका थिए । स्टारहरुका आधारमा यो समूहमा सिता घिमिरे सबैभन्दा अगाडि छिन् । त्यस्तै यसअघि नै भएको उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा सरोज र सिताले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५७५.५ अंक प्राप्त गर्दै ३ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । त्यस्तै सविन र रिताले निर्णायकहरुबाट ५६८ अंक प्राप्त गर्दै जम्मा १४ अंकले दोहोरी जितेका थिए । उत्कृष्ट २४ को राउण्डमा सरोज र सिताले सविन र रिताको भन्दा बढी अंक प्राप्त गरेका थिए भने सविन र रिताले बढी अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए ।
२) प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीसँग जीवन सिग्देल र अस्मिता डल्लाकोटी– दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ छनौटपछिको दोस्रो दोहोरी भिडन्तमा प्रकाश पराजुली र मिना बुढाथोकीसँग जीवन सिग्देल र अस्मिता डल्लाकोटीले दोहोरी भिड्दैछन् । उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा प्रकाशलाई निर्णायक चन्द्र शर्माले थ्री स्टार र बाँकी ३ जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । त्यस्तै मिनालाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । अस्मितालाई निर्णायक रमेश बिजीले फाईभ स्टार र अन्य निर्णायकहरुले फो स्टार प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै जीवनलाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार प्रदान गरेका थिए । यो समूहमा स्टारहरुका आधारमा अस्मिता सबैभन्दा अगाडि छिन् । यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तका क्रममा प्रकाश र मिनाले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५६८ अंक प्राप्त गर्दै ७ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । त्यस्तै जीवन र अस्मिताले निर्णायकहरुबाट जम्मा ४६० अंक प्राप्त गर्दै ०.५ अंकको झिनो अन्तरमा हार व्यहोरोका थिए । तर उनीहरुपछि वाईल्ड कार्डमार्फत शोमा फर्किएका थिए । उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा प्रकाश र मिना उनीहरुभन्दा अगाडि थिए ।
३) राजु केसी र डिला बिकसँग मिना नेपाल र राजेन्द्र पाठक–दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ छनौटपछिको तेस्रो दोहोरी भिडन्तमा राजु केसी र डिला बिकसँग मिना नेपाल र राजेन्द्र पाठकले दोहोरी भिड्दैछन् । उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा राजुलाई दुई जना निर्णायकले फाईभ स्टार प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै उनलाई निर्णायक प्रजापति पराजुलीले फो स्टार र सिता थापाले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । डिलालाई निर्णायक चन्द्र शर्माले फो स्टार र अन्य निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । राजेन्द्रलाई सबै निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए भने मिनालाई दुई जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार र दुई जना निर्णायकहरुले फो स्टार दिएका थिए । स्टारहरुका आधारमा यो राउण्डमा राजु सबैभन्दा अगाडि छन् । राजु र डिलाले यसअघि उत्कृष्ट २४ को दोहोरी भिडन्तमा निर्णायकहरुबाट ५८४.५ अंक प्राप्त गर्दै १६.५ अंकको अन्तरमा दोहोरी भिडन्त जितेका थिए । यो उत्कृष्ट २४ को क्रममा सर्वाधिक बढी अंकका आधारमा हारजित भएको दोहोरी भिडन्त थियो । मिना र राजेन्द्रले निर्णायकहरुबाट जम्मा ५९९ अंक प्राप्त गर्दै ५ अंकले हार व्यहोरेका थिए । तर उनीहरु वाईल्ड कार्डमार्फत पून शोमा प्रवेश गरेका थिए । यो राउण्डमा अंकका आधारमा मिना र राजेन्द्र अगाडि देखिएपनि जितका आधारमा भने राजु र डिला अगाडि भएका थिए ।
४) सपना रोका र विजय बानियाँसँग शोभा कार्की र बालचन्द्र बराल– दोहोरी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ८ छनौटपछिको अन्तिम अर्थात चौथो दोहोरी भिडन्तमा सपना रोका र विजय बानियाँसँग शोभा कार्की र बालचन्द्र बरालले दोहोरी भिड्दैछन् । उत्कृष्ट १६ को दोहोरी भिडन्तमा सपनालाई दुई निर्णायकले फो स्टार र अर्का दुई निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । विजयलाई एक जना निर्णायकले फो स्टार र बाँकी ३ जना निर्णायकहरुले थ्री स्टार प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै बालचन्द्रले सबै निर्णायकहरुबाट फो स्टार प्राप्त गरेका थिए भने शोभाले दुई जना निर्णायकबाट फो स्टार र दुई जनाबाट थ्री स्टार प्राप्त गरेका थिए । यस समूहमा स्टारहरुका आधारमा बालचन्द्र सबैभन्दा अगाडि छन् । सपना र विजयले यसअघि उत्कृष्ट २४ को क्रममा निर्णायकहरुबाट जम्मा ५६९.५ अंक प्राप्त गर्दै ९.५ अंकको अन्तरमा जीत हासिल गरेका थिए । त्यस्तै शोभा र बालचन्द्रले निर्णायकहरुबाट जम्मा ६०४ अंक प्राप्त गर्दै ५ अंकको अन्तरमा जित हासिल गरेका थिए । उक्त राउण्डमा जम्मा प्राप्त भएको अंकका आधारमा शोभा र बालचन्द्र अगाडि थिए भने जीत भएको अंकको अन्तरमा आधारमा भने सपना र विजय अगाडि थिए । हेर्नुहोस् भिडियो सामग्री–